बिहानै निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रचण्डकाे भनाइले लियो यस्तो उग्र रूप? के भनेका थिए प्रचण्डले? – PathivaraOnline
Home > समाचार > बिहानै निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रचण्डकाे भनाइले लियो यस्तो उग्र रूप? के भनेका थिए प्रचण्डले?
काठमाडौं २९ भदाै । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसाका घटनाहरु नियोजित हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । प्रचण्डले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई नराम्रो तथा असक्षम र असफल देखाउने कोशिश स्वरुप यस्ता घटनाहरु गराइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
यदि सरले मलाई बिहे गरेकाे भए म बला’त्कारकाे मुद्दा लगाउने थिइन्
रूसबाट हिडेका ११ नेपालीहरू लिथआनिया र बेलारुसको जंगलमा अलपत्र